ToStock Trading N'ihi Oke Uru! - Mụọ ahia 2 Eprel 2021
Mụọ 2 Trade 2021 Ntuziaka Na Ahịa Ahịa!
Na-achọ ịzụta, ree, na azụmaahịa ahịa n'ịntanetị? Ọ bụrụ otu a, enwere ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na ntanetị na oghere ịntanetị nke ga - enyere gị aka ịzụta ebuka n’enweghị nsogbu ọ bụla. Naanị ị chọrọ ịchọta onye na-ere ahịa nke kachasị mkpa gị, tinye ego na debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ obere akpa, ị ga-agakwa.
N'ọtụtụ oge, saịtị azụmaahịa na-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ narị equities na pịa bọtịnụ. Nke a na-agụnye ahịa ndị bụ isi dịka New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ, na London Stock Exchange (LSE).
N'isiokwu a, anyị na-ekpuchi ins na outs nke otu esi arụ ọrụ azụmaahịa n'ịntanetị na-arụ ọrụ. Mgbe ị gụchara ya, ị ga-ebu ihe niile dị mkpa iji nweta ọrụ ịzụ ahịa gị na ụkwụ aka nri.
Mara: Ọtụtụ ndị na - ere ahịa ihe ọhụụ na - efufu ego na mbọ mbụ ha, yabụ ọ dị oke mkpa na ị nwere nghọta siri ike banyere ihe egwu dị na ya. Dị ka ndị dị otú a, anyị nwere olile anya na site n'ịgụ ntuziaka a n'ụzọ zuru ezu, ị ga-enwe ngwaọrụ niile achọrọ iji nwee ihe ịga nke ọma na ebe a na-ere ahịa n'ịntanetị!
Kedu ihe bụ Ahịa Ahịa?
O doro anya na ọdịiche dị n'etiti 'ịzụ ahịa ngwaahịa' na naanị itinye ego na ngwaahịa. Ọ bụrụ na ọ bụ nke abụọ, nke a pụtara na ị na-achọ ịzụta mbak na echiche nke ijide ha afọ ole na ole. N’okporo ụzọ, ị ga-anakọta nkata nke ọ bụla, wee nwee olile anya ibudata ebuka na uru. Ọ bụrụ na nke a bụ ihe ị na-eme mgbe ahụ, ị ​​ga-eji omenala azụmaahịa dị n'ịntanetị.
N'ihe banyere ngwaahịa trading, nke a bụ usoro ịzụ na ire ebuka na obere oge. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-enwe mmetụta na bullish na Apple. Nwere ike ikpebi ịzụta worth 500 uru nke ebuka, na mgbe ahụ na-ere ha a awa ole na ole mgbe e mesịrị na a uru nke 2%. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike inwe mmetụta bearish na IBM, yabụ ị kpebiri ire obere ahịa ya. Nke a bụ isi ihe dị na azụmaahịa azụmaahịa, ebe ị nwere ikike ị nweta uru ma ọ bụrụ na uru nke ụlọ ọrụ na-agbada.
Ọzọkwa, saịtị ịzụ ahịa na-enye gị ohere itinye ihe nkwụnye ego. Nke a bụ ebe ị nwere ikike iji azụmaahịa karịa ego karịa na akaụntụ gị. Iji maa atụ, ọ bụrụ na ị zụta £ 100 bara uru nke BT na ntinye nke 5: 1, uru ahịa gị ga-abụ £ 500. N'ụzọ dị oke mkpa, nyiwe azụmaahịa na-akwado ntinye ego site na CFDs (nkwekọrịta-maka-iche). Nke a pụtara na ọ bụghị gị nwe ngwaahịa ahụ. Kama nke ahụ, ị ​​na-ekwu nanị uru ọ ga-aba n'ọdịnihu.
Kedu ka ahịa ahia si arụ ọrụ?
Ahịa ahia bụ usoro ịzụ na ire ere na obere oge. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ahịa anaghị ejikarị ọnọdụ emeghe ihe karịrị awa ole na ole, ndị ọzọ nwere ike itinye ego maka ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụ izu. Kedu ụzọ ọ bụla, echiche kachasị elu bụ ma:
Ree ebuka maka ọnụahịa dị elu karịa nke ị kwụrụ - ọ bụrụ na ịga 'ogologo'
Zụta ebuka maka ego dị ala karịa ka ị kwụrụ - ọ bụrụ n ’ịga‘ mkpụmkpụ ’.
Dị ka ndị dị otú a, ihe mbụ ị ga-eme mgbe ịzụ ahịa ngwaahịa bụ ma ịchọrọ ịga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ.
✔️ Iga Ogologo Oge na Ahịa
Na ụdị nke kachasị, ịga ogologo oge na ngwaahịa pụtara naanị na ị na-azụ mbak n'ihi na ị chere na ọ ga-abawanye na ọnụahịa. N'echiche a, nke a adịghị iche na ịzụta ebuka na onye na-ere ahịa ọdịnala.
N'aka ozo, i nwere olile anya ire ha maka onu ahia kariri nke mbu. Ọ bụrụ n’ikpebie ịga ogologo oge, a ga - achọ ka ị nye iwu ‘zụrụ’ na onye ị họọrọ.
Nke a bụ ihe atụ nke otu esi azụ ahịa ngwaahịa ogologo oge na-arụ ọrụ.
Are na-enwe mmetụta dị egwu na ebuka Nike, yabụ ị na-etinye iwu ịzụta
Mkpokọta osisi gị bụ $ 1,000
Ọnụahịa ahịa ugbu a bụ $ 85
Fewbọchị ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, ọnụ ahịa Nike dị $ 95
Nke a na - anọchite anya mmụba nke 11.7%
Igbachi-na gị uru, ị na-etinye a na-ere iji
Na osisi nke $ 1,000, mmụba nke 11.7% na-atụgharị gaa na uru nke $ 117 - obere ụgwọ
Dị ka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ dị n'elu, ogologo usoro gị gara nke ọma n'ihi na ị nwere ike ree ebuka Nike gị na $ 10 dị elu karịa ka akwụburu gị. Iji gbachie uru gị, achọrọ ka ị debe 'ire'. Dị ka ndị dị otú ahụ, a na-emechi ahịa ahụ ma na-agbakwunye ihe ha retara na akaụntụ ahịa azụmaahịa gị.
✔️ Shortga mkpụmkpụ na ngwaahịa
Ọ gwụla ma ị bụ onye na-etinye ego na ụlọ ọrụ, ndị na-ere ahịa ahịa ọdịnala anaghị ekwe ka ị gaa mkpụmkpụ na ngwaahịa. Kama nke ahụ, ị ​​nwere ike ịga ogologo oge. Nke a bụ ihe mere nyiwe azụmaahịa azụmaahịa CFD ji ewu ewu na ndị ahịa ụbọchị, ebe ha nwere ike ị nweta uru mgbe ha kwenyere na ụlọ ọrụ ga-ada na uru.
N'ezie, ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ ị nwere ike mkpụmkpụ na oghere ndị na-ere ahịa CFD - ebe ị nwere ike ịzụ ahịa ihe ọ bụla ị nwere ike iche. Nke a na-agụnye ihe niile si mmanụ, gas, indices, ETFs, gold, na cryptocurrencies.
Ka o sina dị, echiche nke ime ka ihe dị mkpụmkpụ na-adịkarị mgbagwoju anya maka ndị ahịa ọhụụ, n'ihi ya, anyị ekpughela ihe atụ dị n'okpuru.
Na-enwe mmetụta bearish na ebuka Facebook, yabụ ị kpebiri itinye ahịa ere
Ọnụ ego Facebook dị ugbu a bụ $ 130
Fewbọchị ole na ole ka e mesịrị, ebuka Facebook agbadawo na $ 102
Nke a na-anọchite anya ọdịda nke 21.5%
Kpebiri igbachi-n’ime uru gị, yabụ ị na-etinye usoro ịzụta
Na osisi nke $ 1,000, mbelata 21.5% na-atụgharị gaa na uru nke $ 210.50 - obere ụgwọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ site n'elu, ị nwetara uru dị mma nke 21.5%, n'ihi na uru nke ngwaahịa Facebook jụrụ site na ego a. N'ihe atụ abụọ ahụ, anyị kwuru na uru gị ga-erubere ụgwọ.
Nke a bụ maka na ọnọdụ gị Nike na Facebook mere ụbọchị ole na ole. Ka anyị na-ekpuchido na njedebe ma emechaa, saịtị ịzụ ahịa ngwaahịa ga-akwụ gị ụgwọ ego abalị maka ụbọchị ọ bụla ị ga-emeghe ọnọdụ gị.
Kedu Ebuka enwere m ike ahia?
Ebe ahia ahia kacha mma na ebe a na-edebe ihe ntanetị n'ịntanetị na-enye gị ọtụtụ narị ohere, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ puku nke hara nhatanha. Nke a na - enye gị ohere ịmepụta pọtụfoliyo dị iche iche nke mbak na ịpị bọtịnụ.
N'okpuru ebe anyị depụtara ụfọdụ ahịa ndị ahịa kachasị na-ekpuchi ikpo okwu azụmaahịa.
NYSE bu ahia ahia ahia kachasi ahia n'ime uwa, ya mere o bu ihe ezi uche di na ndi na-ere ahia na ntaneti na enye gi ohere. E depụtara ụfọdụ n'ime nnukwu ụlọ ọrụ na-acha anụnụ anụnụ na NYSE, gụnyere nke Disney, Berkshire Hathaway, Ford Motors, JP Morgan, Visa, na Nike.
Anọghị n’azụ NYSE bụ nke NASDAQ. Imirikiti ụlọ ọrụ ndị edepụtara na mgbanwe ahụ sitere na ụwa nke teknụzụ. Chee echiche banyere Facebook, Apple, Twitter, Netflix na Microsoft.
London Ahịa Exchange (LSE)
LSE nwekwara ụlọ ụfọdụ nnukwu ụlọ ọrụ, gụnyere ọkacha mmasị nke BP, British American Tobacco, Barclays, HSBC, na Tesco. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ịzụ azụmaahịa obodo UK buru ibu, ọ nwere ike ịba uru itinye ego na ndepụta FTSE 100.
Azụmaahịa Tokyo (TSE)
Maka ndị gị na-achọ inweta ekpughe na akụnụba Eshia, TSE bụ ụlọ ụfọdụ ebuka buru ibu. Nke a gụnyere ọkacha mmasị nke Soft Bank, Mitsubishi, na Toyota.
Ahịa Ahịa na Onye nwe ya
Dịka anyị kwuburu na mbụ, saịtị azụmaahịa na-enye gị ohere ịzụta ma ree mbak site na CFDs. Nke a pụtara na ị nweghị ngwaahịa ị na-ere. Kama nke ahụ, ndị CFD na - enye gị ohere ịkọ nkọ banyere ọdịnihu nke ngwaahịa a - ọ bụ ya mere na ị nwere ikike ịga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ.
N’akụkụ tụgharịa, ị gaghịenweta ikike ikike ọ bụla mgbe ị na-ere CFDs, nke pụtara na ị gaghị enweta ụgwọ. Kama, ị ga - enweta ego site na ị nweta ego site na ịzụrụ / ire ngwaahịa ahụ na ọnụahịa dị elu / ala karịa ka ị kwụrụ.
Ahịa ahia na ntinye na oke
Ọ bụrụ na ị na-amalite ụwa nke ịzụ ahịa n'ịntanetị, ọ dị mkpa na ị nwere nghọta siri ike banyere etu leverage na oke ọrụ si arụ ọrụ. A sị ka e kwuwe, ọtụtụ ndị ahịa ọhụụ ọhụụ na - efufu ego - yabụ na ịchọghị ịkọba ọghọm ndị a site na itinye ego.
N'ime ụdị ya kachasị mkpa, ntinye ego na-enye gị ohere ịzụ ahịa karịa ego karịa na akaụntụ gị. E gosipụtara nke a dịka oke, dịka 5: 1. N'okwu Layman, nke a pụtara na nke ahụ nwere ike ịbe zụta ma ọ bụ ree ahịa na oge 5 uru nke 'oke' gị.
Oke dị ka nkwụnye ego, ọ bụ ihe na - enye gị ohere itinye ihe leverage. Ka anyị na-ekpuchi nkọwa zuru oke n'oge na-adịghị anya, ọ bụrụ na azụmaahịa azụmaahịa gị na-emegide gị site na pasent ụfọdụ, ị ga-enwe ohere ịhapụ oke gị na onye na-ere ahịa.
Tupu anyị gawa n'ihu, ka anyị lelee ngwa ngwa nke ụdị azụmaahịa ga-aga nke ọma ga-adị.
Ihe Nlereanya nke Stockga nke Ọma Ahịa ahia na leverage
Are na-enwe mmetụta dị egwu na osisi American American Tobacco (BAT), yabụ ị na-aga ogologo oge
Ọnụahịa ahịa BAT ugbu a bụ. 29.50
Only nwere £ 200 na akaụntụ gị, mana ịchọrọ ịzụ karịa
Dịka oke ókè UK, itinye ntinye nke 5: 1 na ahia gị
Nke a pụtara na ị na-etinye a Buy iji na BAT ebuka uru £ 1,000
Couplebọchị ole na ole ka nke ahụ gasịrị, ebuka BAT na-abawanye na. 33.50 (13.5%), yabụ ị na-enweta ego-na uru gị site na ịtụkwasị usoro ire ere
Dịka ihe atụ dị n'elu, ị gaara eme 13.5% uru na osisi 200 gị, nke pụtara £ 27. Agbanyeghị, ka itinye n'ọrụ 5: 1, uru gị bara uru bụ £ 135 (£ 27 x 5: 1)
Ihe Nlere nke ahia ahia na adighi nma
Itinye leverage na ngwaahịa ahịa agaghị agara gị oge niile, dị ka anyị gosipụtara na ihe atụ dị n'okpuru.
Iji mee ka ihe dị mfe, ka anyị jigide otu ihe atụ ndị dị n'elu
Ighaghachi - ị na-etinye iwu ịzụta 200 £ na British American Tobacco (BAT) na ntinye nke 5: 1
Nke a pụtara na ahia gị ruru £ 1,000 - akụkụ gị bụ £ 200
Fewbọchị ole na ole ka e mesịrị, ebuka BAT gbadara ruo £ 23.60
Ebe nke a na - anọchite anya mbelata nke 20% - nke dabara n'akụkụ nke ị tinyere na azụmaahịa ahụ (£ 200 = 20% nke £ 1,000), azụmaahịa gị 'mmiri mmiri'
Nke a pụtara na ị ga-efu mar 200 oke gị
Dịka ị pụrụ ịhụ site n'elu, ọ bụrụ na azụmaahịa azụmaahịa gbadara site na ọnụọgụ ụfọdụ, ị ga-atụfu oke gị niile. Nanị ụzọ ị ga - esi gbochie ịbụ mmiri mmiri bụ itinyekwu ego na akaụntụ gị.
N'ihe banyere ahia ego na 5: 1, oke bụ 20% (1/5 = 0.2). Agbanyeghị, ka leverage ahụ na - abawanye, oke na - ebelata. Dịka ọmụmaatụ, ntinye nke 20: 1 ga-achọ oke nke naanị 5% (1/20 = 0.05). Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ahịa ngwaahịa wee megide gị site na 5% ma ọ bụ karịa, ị ga-atụfu oke gị.
Iwu ahia ahia
Ugbu a, anyị kwesịrị ikwurịta mkpa ọ dị ịtụkwasị usoro ahịa azụmaahịa. Azụmaahịa ọ bụla ị debere ga-achọ iwu mmadụ abụọ. Otu imeghe ahia, ma otu mechie ya.
Ọ bụrụ na ị ga - aga ogologo na ngwaahịa, ị ga - eji iwu ‘zụrụ’ mepee wee mechie ‘ire’ ahịa
Ọ bụrụ na ị dị mkpụmkpụ na ngwaahịa, ị ga-eji iwu 'ree' mepee wee jiri usoro 'ịzụta' mechie
Ozugbo i kpebisiri ike ma ị na-etinye iwu ịzụta ma ọ bụ ree, e nwere ọtụtụ ụdị usoro ndị ọzọ a gwara gị itinye.
Ahịa ma ọ bụ Ordergba Iwu
N'agbanyeghị ihe ị na-azụ ahịa, ị ga-ahọrọ mgbe niile n'etiti usoro 'ahịa' ma ọ bụ iwu 'njedebe'.
Y’oburu n’icho uzo ahia, nke a putara na obi di gi nma iwere onu ahia ozo. Ndị ahịa a kara aka anaghị eme nke a, ebe ị na-achịkwa njikwa ọnụahịa ntinye gị.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ahịa Nike ruru $ 85 mgbe ị dejupụtara iwu ahụ, ịnwere ike igbu ahịa ahụ na $ 85.50. Nke a bụ n'ihi na azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa ga-eme azụmaahịa ahụ na ahịa ahịa ọzọ dị.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike chọọ ịrapagidesi ike na iwu ịgba ahịa gị. Nke a na - enye gị ohere ịkọwa ọnụahịa ọnụahịa gị kwesịrị ime na. N'ezie, ọ nweghị nkwa ọ bụla na ọnụahịa gị ga-adakọ, mana ọ dịkarịa ala na-enye gị ohere ịbanye ahịa na ọnụahịa na-arụ ọrụ maka gị.
N'ịnọgide n'otu ihe atụ - ebe ọnụahịa Nike dị ugbu a na $ 85. Agbanyeghị na ị na-enwe mmetụta dị egwu, ị nwere ike ịchọrọ ịbanye n'ahịa ahụ mgbe ọnụ ahịa ruru $ 83. Nke a ga - enyere gị aka ịzụta ebuka na mbelata, ma zere nke izizi mgbasa.
✔️ Iwu nkwụsị
O doro anya na iwu nkwụsị ga-abụ ezigbo enyi gị mgbe ị na-ere ahịa na ntanetị. Maka ndị na-amaghị, nke a na-enye gị ohere ịkọwa ọnụahịa ọnụahịa ịchọrọ ịchọrọ imechi azụmaahịa gị. Karịsịa, ọ na-enye gị ohere ịkwụsịlata ọghọm gị n'ihe omume azụmaahịa na-emegide gị.
Ka anyị kwuo na ị na-azụ ahịa ebuka IBM, ma ị kpebiri ịbanye n'ahịa na $ 112 site na njedebe oke
I kpebiri na ịchọghị ida ihe karịrị 5% nke osisi gị, yabụ ịtọwara usoro nkwụsị-nkwụsị
Setịpụrụ nkwụsị nkwụsị gị na-ebute ego na $ 106.40 - nke bụ 5% na-erughị ọnụahịa ntinye gị nke $ 112
N'ime otu izu, ebuka IBM bara uru ugbu a na 20% na $ 89.60
Agbanyeghị, dịka ị wụnye nkwụkwụ na $ 106.40 - naanị pasent 5 nke gị nwụrụ.
Dịka i si hụ site na n'elu, mfu gị niile belatara na $ 50 (5% nke $ 1,000 osisi), na-emegide $ 200 (20% nke $ 1,000 osisi).
Na na kwuru, ọ dị mkpa iburu n'obi na nkwụsị-ọnwụ iwu na-mgbe 100% na-ekwe nkwa. Site na nke a, anyị na-ekwu na na ọnọdụ ọnọdụ ahịa na-agbanwe agbanwe, usoro ịkwụsị ịkwụsị gị nwere ike ọ gaghị adakọ.
Dị ka ndị dị otú a, ọ bara uru ịtụle iwu 'ịkwụsị' ọnwụ. Site na ịkwụ ụgwọ gbasaa ntakịrị, onye na-ere ahịa ga-ekwenye n'onwe ya na ịkwụsị ụgwọ nkwụsị gị na - ebute - n'agbanyeghị ma ọ dabara.
Order Iwu Nweta-Uru
N'otu aka ahụ dị ka ihe dị mkpa, iji nweta uru na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ ka usoro nkwụsị na-akwụsị, mana na ntụgharị. Yabụ, ọ na-enye gị ohere igbachi-na gị uru mgbe a ụfọdụ price-ebe lekwasịrị zutere.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-ere ahịa Coca Cola na ọnụahịa zụrụ nke $ 47. Setịpụrụ onwe gị uru nke 10%, yabụ ị setịpụrụ usoro iji nweta uru gị na $ 51.70.
Ọ bụrụ na mgbe ọnụahịa Coca Cola kụrụ ego a, azụmahịa gị ga-emechi ozugbo - yana ego agbakwunyere na njikwa akaụntụ gị.
Ego ahia ahia
Otu n'ime usoro kachasị mkpa iji lelee anya mgbe ị na-esonye na saịtị ahịa ahịa ọhụrụ bụ isi ego. Nke a nwere ike ịdị n'ụdị n'ụdị na nha, yabụ ọ kachasị mma na ị ghọtara nke ọma ebubo ndị ị ga-enweta.
Ego na-ahia ahia
Dị ka aha ahụ na-egosi, ego na-abụghị azụmaahịa metụtara ụgwọ na-anaghị emetụta azụmaahịa azụmaahịa gị. Nke a na-amalite na mbido, dịka ụfọdụ ndị na-ere ahịa azụmaahịa na-akwụ ụgwọ ego nkwụnye ego - nke na-abụkarị pasent nke ego ị tinyere.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye na-ere ahia na-akwụ ụgwọ 1.5% na nkwụnye ego Visa, ma ịchọrọ itinye £ 1,000 na akaụntụ gị, ị ga-akwụ £ 15 ụgwọ. Nke a na - abụkarị ikpe banyere iwepụ ego, yabụ - yabụ kpachara anya tupu ị mepee akaụntụ.
Feegwọ ndị ọzọ na-abụghị azụmaahịa ị kwesịrị ịmara bụ nke ego arụghị ọrụ. Nke a boro onye na-ere ahia mgbe akaụntụ ahịa azụmaahịa gị na-anọgide na-erute ọtụtụ ọnwa. Ọ bụrụ na ọ mere, onye na-ere ahịa ga-ewepu ego ha na-anaghị arụ ọrụ site na njikwa akaụntụ gị kwa ọnwa ruo mgbe ọ nweghị ihe fọdụrụ.
Isslọ Ọrụ Ahịa Ahịa
Imirikiti, mana ọ bụghị nyiwe azụmaahịa azụmaahịa niile ga-akwụ ụgwọ ọrụ. Ọtụtụ mgbe, nke a ga-abụ pasent nke ego ị na-azụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye na-ere ahịa na-ebo kọmịlị nke 0.5%, ị zụrụ £ 1,000 maka uru BT, mgbe ahụ ị ga-akwụ ụgwọ ego nke of 5.
Rịba ama, ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ na nsọtụ abụọ nke azụmahịa. Yabụ, ọ bụrụ na i resịrị osisi BT gị uru zuru ezu nke £ 1,200 - ọrụ 0.5% gị ga-abụ £ 6.
Na nke ahụ kwuru, ihe ka ọtụtụ n'ime nyiwe azụmaahịa azụmaahịa anyị kwadoro na ibe a na-enye gị ohere ịzụta ma ree mbak CFD na-akwụghị ụgwọ ọ bụla. Kama, ọ bụ naanị mgbasa ka ị ga-achọ ịchọ.
Ndị na-ere ahịa ahịa Newbie na-emehiekarị nke ichefu gbasara mgbasa, n'ihi na ọ bụghị 'nyochawa' ego. Site na nke a, anyị na-ekwu na mgbasa anaghị ewepu ego ọ bụla na njikwa akaụntụ gị. Kama, mgbasa ahụ bụ naanị ọdịiche dị n'etiti 'ịzụta' na 'ree' ego nke ngwaahịa a.
Ọnụ ego izu ahia Nike bụ $ 85.00
Ọnụahịa ere ahịa Nike bụ $ 83.30
Ihe dị iche n’etiti ọnụ ahịa abụọ a bụ 2% Nke a pụtara na ị ga - enweta uru opekata mpe 2% naanị iji gbajie. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ị tinyere iwu ịzụta na Nike na $ 85.00 - naanị ịmara na i mehiere.
Ka o siri dị, ị kpebiri ire ebuka ozugbo. Agbanyeghị, kama inwe ike ree ebuka na otu ego ị zụtara ha ($ 85), ị ga-eme ya na ire ere.
Dịka nke a ruru ọnụ ala dị ala nke $ 83.30 - ị ga - eme ọnwụ 2%. N’ụzọ dị oke mkpa, ị ga-agbaji ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọnụahịa ire ya ruru $ 85.
Nke a bụ ihe mere ị ga-eji họrọ usoro ịzụ ahịa azụmaahịa nke na-enye mgbasa dị oke egwu. Ma ọ bụghị ya, ọdịiche dị na ịnye ọnụahịa ga-eri uru gị mgbe niile.
Etu esi Ahịa Ahịa n'Onlinentanet?
Mgbe ahia otu ngwaahịa na ndụ gị, na-eche otú usoro n'ezie na-arụ ọrụ? Ọ bụrụ otu a, ị ga-ahụ usoro ntụzi aka dị n'okpuru. Site na isoro ntuziaka ndị ahụ, ị ​​nwere ike ịzụ ahịa nke mbụ gị n’ihe na-erughị nkeji iri!
Kwụpụ 1: Chọta Ebe Ahịa Ahịa
Firstgbọ mmiri izizi izizi gị ga - abụ ịchọta ọkwa azụmaahịa na - egbo mkpa gị. Dịka ọmụmaatụ, ị na-achọ onye na-ere ahịa nke na-enye ohere ịbanye n'ahịa ahịa mba ụwa, ka ọ bụ ụgwọ kachasị mkpa gị?
Iji nyere gị aka n'ụzọ, ị ga-ahụ ọtụtụ ndụmọdụ maka otu ị ga - esi họrọ saịtị azụmaahịa na - aga n'ihu na ibe a.
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nyochaa onye na-ere ahịa na onwe gị, anyị ga-atụ aro uru nke nyiwe edepụtara n'okpuru. Ọbụghị naanị na ọ nwere ikikere usoro iwu na otu narị narị ngwa ahịa, mana ị nwere ike itinye ego na kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ.
Kwụpụ 2: Mepee Akaụntụ
Ozugbo ị họrọla saịtị azụmaahịa kwesịrị ekwesị, ị ga-emepe akaụntụ. Nke a bụ na onye na-ere ahia maara onye ị bụ.
Dịka, nye ihe ndị a:
Ikwesiri inyocha njirimara gị. Nke a bụ opekempe ihe achọrọ na ebe a na-ere ahịa n'ịntanetị, ebe ọ na-ahụ na nyiwe na-agbaso iwu mgbochi ego. Ihe ị ga - eme bụ iji bulite akwụkwọ doro anya nke NJ gị nyere gị, onye na-ere ahịa ga-enwe ike ịme ya ozugbo.
Kwụpụ 3: Nkwụnye ego
Ozugbo inyochapụtara njirimara gị, onye na-ere ahịa ga-arịọ gị ka itinye ego ụfọdụ. Banyere nhọrọ ịkwụ ụgwọ, nke a ga-adị iche na onye na-ere ahịa na onye na-ere ahịa.
Site na nke ahụ, ị ​​na - enwekarị nhọrọ itinye ego na akaụntụ gị yana ihe ndị a:
Bank Waya / Nyefee
Kwụpụ 4: Chọọ Ego ahia
Ugbu a ị kwụrụ ụgwọ maka ụlọ ahịa gị, ị dịla njikere ịmalite ịzụ ahịa. Iji mee ka bọọlụ ahụ na-aga, chọọ ngwaahịa ndị ị chọrọ ịzụ. Ọ bụrụ na ịnweghị oke nchọnchọ n'uche, chọgharịa site na ngalaba ahịa azụmaahịa nke onye na-azụ ahịa.
Kwụ na 5kwụ XNUMX: Ebe Stock Trading Order
Iji mezue usoro a, ị ga-achọ ịtụ ugbu a. Anyị tụlere ins na outs nke otu ị si etinye ahịa azụmaahịa na mbụ na ntuziaka anyị, yabụ nweere onwe gị inyocha ngalaba ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka nchekwa gị nwee ume.
Ma ọ bụghị ya, soro usoro ndị edepụtara n'okpuru iji nweta azụmaahịa azụmaahịa izizi gị:
Họrọ si a Buy (ogologo) ma ọ bụ na-ere (obere) iji
Tinye nha ahia gị (na akaụntụ ego gị)
Họrọ si a ahịa ma ọ bụ ịgba iji
Ọ bụrụ na ị chọrọ itinye leverage, họrọ gị otutu
Debe usoro ịkwụsị iji belata nsogbu gị
Debe iwu iji were-uru iji mechie uru gị
Ozugbo ị kwadoro iwu ahụ, ịzụrụ ihe ị ga-eme n'ime ụbọchị ole na ole.
Nzọụkwụ 6: Imechi Ahịa Ahịa Gị
Y’oburu n’itinye ego nkwụsị na inweta-uru, ị gaghị achọ ime ihe ọzọ. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ naanị otu n'ime ihe abụọ nwere ike ime. Na-enweta ego mgbe ebutere ihe ị na-enweta na-enweta ego, ma ọ bụ na-efunahụ gị ego mgbe a na-ebute iwu ịkwụsị gị.
Na nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ị wụnyeghị iwu ọpụpụ ọ bụla na azụmaahịa gị, ị ga-eji aka gị mechie ya.
Y’oburu n’itinye ihe zutara ahia, dobe ahia ghapu ahia gi
Ọ bụrụ na ị debere ire ere, nye iwu ịzụta ka ịpụ ahịa gị
Ozugbo ahia gị mechiri, a ga-agbakwunye ụgwọ ahụ na njikwa azụmaahịa gị.
Etu ị ga-esi họrọ Platform Trading Platform
Yabụ ugbu a anyị akọwarala ins na out nke etu esi azụ ahịa ngwaahịa na-arụ ọrụ, ị kwesịrị ịmalite ugbu a iche echiche banyere ikpo okwu ịchọrọ iji. Enwere ọtụtụ narị ndị na-eweta ahịa n'ahịa, yabụ ịmara onye na-ere ahịa ịdebanye aha ya nwere ike ịbụ ihe ịma aka.
Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-atụ aro ịme echiche ndị a tupu ịbanye na saịtị azụmaahịa ọhụrụ.
Tupu ị nweta usoro dịka ụgwọ, mgbasa, na ịkwụ ụgwọ - ịkwesịrị ijide n'aka na edobere usoro ị na-azụ ahịa ngwaahịa gị. Ndị na-ere ahịa niile anyị na-akwado ka ejiri akwụkwọ ikike dị otu FCA (UK), ASIC (Australia), ma ọ bụ CySEC (Saịprọs). Ọ bụrụ n ’isonyere onye na-ere ahịa na ọ bụghị achịkwa, ego gị dị n'ihe egwu.
Mentzọ ịkwụ ụgwọ
Ikwesiri inyocha uzo ugwo ahia ahia ahia na enye. Imirikiti ndị na - agụ akwụkwọ anyị na - ahọrọ itinye ego na debit ma ọ bụ kaadị kredit, ebe nke a na - enye gị ohere ịmalite azụmaahịa ozugbo. E-wallets bụkwa ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ irite uru site na nkwụnye ego ozugbo.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ikpebi itinye ego na akaụntụ akụ. Ọ bụ ezie na ị ga - enwerịrị ikike dị elu, nkwụnye ego nwere ike iwe ụbọchị ole na ole tupu ọ rute na akaụntụ gị.
Agbasa na andlọrụ
Anyị na-ahọrọ nyiwe azụmaahịa na-enye ngwakọta zuru oke n'etiti mgbasa siri ike na ọrụ dị ala. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ n'ime ndị na-ere ahịa anyị kachasị elu na-enye ọrụ na-enweghị ọrụ, mana ị nwere ike gbasaa obere elu karịa nyiwe ndị ọzọ. N'otu aka ahụ, ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị na-ere ahịa na-enye mgbasa-efu na nnukwu ebuka, mana ọrụ na-abụkarị n'akụkụ dị elu.
Leverage Limits Oke
Y’oburu na ichoro ire ahia na ahia ahia, ikwesiri igbaputa na onye ahia gi choro. Dabere na ọnọdụ gị, enwere ike ịbelata ole leverage onye na-ere ahịa na-enye gị. Dịka ọmụmaatụ, ndị dabere na UK na European Union na-agbanye na 5: 1 na ebuka. Mba ụfọdụ anaghị etinye oke ma ọlị, yabụ na ị na-ahụkarị ndị na-ere ahịa na-enye ego ha ruru 500: 1, nke buru ibu.
Mmụta na Nnyocha
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta ma ree ebuka n'oge na-adịghị anya, ọ dị ezigbo mkpa na ị ga-eji ngwaọrụ nyocha. N'ihe gbasara nyocha nke teknụzụ, ị ga-achọ iji saịtị azụmaahịa na-enye ọtụtụ ngwa ọgụgụ ngwa ngwa eserese. Ihe ndi ozo bu ihe di nkpa na uwa nke osisi na mbak, ya mere choo onye ahia ahia nke na enye ezi oge. Atụmatụ ahia.
✔️ Ahịa Ahịa
You chere echiche banyere ụdị nke ngwaahịa na ị chọrọ ahia? Dịka ọmụmaatụ, ebe ụfọdụ n'ime gị nwere ike inwe obi ụtọ na-ere ahịa UK site na London Stock Exchange, ụfọdụ n'ime gị nwere ike ịchọ ịnweta ahịa mba ụwa. Dị ka ndị dị otú a, jide n'aka na ịlele ọnụọgụ ego nke onye na-ere ahịa na-akwado, na ọkachasị, nke mgbanwe ọ na-enye gị ohere ịnweta.
Times Oge dgbapụ
Ọzọkwa site newbie ngwaahịa ahịa, mkpa ka ị na-elele ndọrọ ego iwu gị họọrọ ore ahia. Nke a na-agbada ruo oge awa ma ọ bụ ụbọchị nke onye na-ere ahia na-ewe iji wepu ego. Anyị ga-atụ aro ịrapara na saịtị azụmaahịa na-azụ ahịa nke na-ahazi ego anaghị akwụ ụgwọ karịa 48 awa mgbe emechara arịrịọ ahụ.
Support Nkwado Ndị Ahịa
I kwesịkwara inyocha ngalaba nkwado ndị ahịa. Anyị na-ahọrọ nyiwe azụmaahịa na-enye nkwado na ọ dịkarịa ala 24/5 - na-esote nke ahịa ahịa. Ọ na-amasịkwa anyị mgbe ndị na-ere ahịa na-enye gị ohere ịkpọtụrụ site na nkata ndụ, ebe nke a na-egbochi mkpa ịkpọ nọmba na-enweghị ego.
5 ahia ahia ahia kacha mma nke 2021 - Top Picks anyị
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nyochaa onye na-ere ahịa na onwe gị, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ atụmatụ ise ahịa azụmaahịa anyị kacha elu nke 2021.
Niile nke ebe anyị na-ere ahịa ahịa ahịa dị elu dabara na njirisi edepụtara n'okpuru:
Onye na-enye ikikere nke ọkwa otu
Ego dị ala, mgbasa, na ọrụ
Na-akwado ụzọ ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị
Top-notch ahịa ọrụ otu
Inye leverage na ire-ere
1. eToro - Best Stock Trading Broker maka Ndị Mbido
eToro bụ FCA, CySEC, na ASIC na-achịkwa ntanetị n'ịntanetị. Ikpo okwu na-enye ihe karịrị 800 ahịa n'ofe ọtụtụ ahịa. Zọ ịkwụ ụgwọ gụnyere debit / kaadị akwụmụgwọ, e-obere akpa, ma ọ bụ nyefee ụlọ akụ. Naanị ezigbo Crypto dị na US.
Ndị otu na AVATrade na-enye ugbu a nnukwu ego 20% nke ego ruru $ 10,000. Nke a pụtara na ị ga-achọ itinye $ 50,000 iji nweta ego kachasị ego. Rịba ama, ịkwesịrị ịkwụnye opekempe nke $ 1,000 iji nweta ego ahụ, ọ dịkwa mkpa ka enyochae akaụntụ gị tupu akwụ ụgwọ ego ahụ. N'ihe banyere ịdọrọ ego ahụ, ị ​​ga-enweta $ 1 maka ọtụtụ nza 0.1 ị na-azụ.
Obere nkwụnye ego $ 1,000
Y’oburu n’achọ itinye ahia ahia ahia gi n’ọzọ, anyị nwere olile anya na ntuziaka miri emi anyị ekpochapụla igwe ojii. Dị oke mkpa, anyị ekpuchila ihe niile achọrọ anyị chere na ọ dị mkpa ka ị mata tupu etinye azụmahịa.
Nke a na-agụnye ihe niile site na mgbasa, ụkpụrụ, isslọrụ, leverage, na iwu. Ọzọkwa, anyị atụlewokwa ise n'ime saịtị azụmaahịa a kachasị akara nke 2021.
N'agbanyeghị ụdị ikpo okwu ị kpebiri ịbanye na ya, hụ na ị ghọtara ihe egwu dị na ịzụ na ire ngwaahịa CFDs - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ itinye ego.
M ga-enweta dividends mgbe erekwa ebuka online?
Site n'ịzụ ahịa ahịa, ị na-atụgharị uche na ntụzịaka ụlọ ọrụ ahụ ga - eme n'ọdịnihu. Dika nke a CFDs na enyere gi aka, igha enwe ikike inweta oke.
Kedu ego ole m nwere ike itinye na saịtị azụmaahịa
Nkwụnye ego kacha nta na-amalitekarị na akara 50. Fọdụ ndị na-ere ahịa na-arịọ maka ihe ndị ọzọ
Kedu ihe kpatara m kwesiri iji bulite NJ mgbe m na-azụ ahịa ahịa na ntanetị?
Siteslọ ahịa azụmaahịa echekwara ka ị bulite NJ iji rube isi na iwu mgbochi ịbịnye ego.
Kedu ego nkwụnye ego m kwesịrị ịkwụ mgbe ị na-azụ ahịa?
Gwọ na-abịa n'ụdị na nha. Nke a nwere ike ịgụnye ụlọ ọrụ azụmaahịa, mgbasa, ụgwọ ego abalị, na ụgwọ ndị na-abụghị azụmaahịa.
Kedu ka m ga-esi ree ebuka?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkọwa uru nke ngwaahịa na-agbadata, naanị tinye usoro ire ere na onye ahịa ị họọrọ. Iji mechie ahia gị, tinye usoro ịzụta.
Enwere m ike ịzụ ahịa ebuka na leverage?
Eeh, saịtị niile ịzụ ahịa ngwaahịa CFD na-enye gị ohere itinye ihe nzipu ego. Agbanyeghị, njedebe gị ga-ekpebi ọnọdụ azụmaahịa gị (mkpọsa ma ọ bụ ọkachamara), yana ọnọdụ gị. Dịka ọmụmaatụ, na UK na European Union, a na-etinye ego ntinye ego na 5: 1 maka ndị na-ere ahịa ahịa.
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ m nwere ike iji tinye ego na saịtị azụmaahịa?
Na-enwetakarị nhọrọ nke itinye ego site na kaadị debit / kaadị, e-obere akpa, ma ọ bụ akaụntụ akụ.
Emelitere ikpeazụ: March 3rd, 2021